Dixie Orange County Hotel - Disney California Hotels
Ịme ndoputa nwere ike ịkpọ
AllNK1-Non Ise siga KingNQ1-Non Ise siga QueenNQQ-Non Ise siga Ugboro abụọ Queen
BLOG FAQIheKpọtụrụ onye na-
12: 26 PM
eji enyere ndụ aka
Isiokwu Park Tickets
Obodo Adọrọ Mmasị
Ebe iri ihe
Ihe mgbe ị na-eme, MEE YA
Ọfọn. MEE YA nke ọma nke na
Mgbe ndị mmadụ hụrụ unu MEE YA
Ha ga-achọ na-abịa azụ
MARA Unu mee ya ọzọ.
WET ná ndụ ị Njem Ihe Egwu,
BỤGHỊ ihe. Nwere akụkọ na-agwa
BỤGHỊ stof na-egosi.
Njem otu puku
Kilomita amalite na a SINGLE
NDỤ ma a obi kara
Adventure ma ọ bụ
ITS mma ịhụ ihe
MGBE karịa anụ banyere ya
A puku ugboro
Ọchị bụ eziokwu mgbe nile, pụrụ ichetụ n'echiche enweghị afọ
Na nrọ DỊ ruo mgbe ebighị ebi.
NA m na agwa m ... IHE
A magburu onwe ụwa
Na na na ONE igwu mmiri pụọ
& NbspFROM a ọma na ọnọdụ
zuru okè n'ebe
ewu ewu na-adọrọ mmasị
Dixie Orange County bụ otu n'ime ndị kasị mma ebe na-anọ n'ime a 15 mile okirikiri nke Disneyland na ndị ọzọ na-ewu ewu na-adọrọ mmasị n'ihi na ọkara price. -Abịa-enwe a 5-kpakpando ahụmahụ on a 3-kpakpando mmefu ego. Ị gaghị akwa ụta na ya.
Ụlọ na oke ime ụlọ
Ma ị bụ otu mmadụ 2 on a ihunanya getaway, ma ọ bụ ezinụlọ nke 5 on kacha Disney ezumike, anyị nwere ime ụlọ maka gị. Họrọ ọ bụla nke anyị ọhụrụ rụzigharịa oke ime ụlọ ga-akasị emezu gị na-ejegharị ejegharị ọchịchọ.
enyi na enyi n'ikuku
Ma ọ bụ aro ebe aga n'ihi na nri abalị, ịhazi gị njem, ma ọ bụ nanị unu na-ekele unu na-a ọnụ ọchị, anyị 24 hour Oche ihu ọrụ dị njikere ime ka ọnụnọ gị dị ka mfe na-atọ ụtọ dị ka o kwere.
na ọgwụgwụ anyị na-akwa ụta
Ohere anyị na-anapụghị
A nkenke akụkọ ihe mere eme banyere
The Dixie ika bụ a ụtụ site ụmụnna nwanyị abụọ a nke atọ, Dixie, onye ndụ ya dị mkpirikpi ọtụtụ ihe kwa anya mmanya na-egbu ọkwọ ụgbọala. -Achọ na-atụgharị na-adịghị mma n'ime a mma, abụọ ndụ ndị nwanyị kere a nkwari akụ na ya aha na dunyere ọdịdị zuru oke nke na-Dixie bụ ... umeala n'obi, classy, ​​nkà, environmentally maara, ọmịiko, na-serene na ọtụtụ ihe ndị ọzọ.
akụkọ zuru ezu
Achọpụta họtel anyị si
Ụlọ & Oke ime ụlọ
-egwu mmiri ohere
Free-adọba ụgbọala tụrụ
Maka ekele WiFi
Executive King - Rates si $ 59.00 / abalị
Ugboro abụọ Queen - Rates si $ 69.00 / abalị
Chọta Dixie Orange County si n'elu
Ụlọ ọrụ & Services
Ewepụghị Screen HDTV w / Cable
Ikuku Internet Access
Ụlọ Service (ejedebeghị)
Nchekwa ego Box (Oche ihu)
Friji & Microwave
Tours E Nwere
Dixie Orange County si n'elu
Isi & Enyele
Ị n'anya elele dị nnọọ ka ị hụrụ n'anya na-eme njem? Nakwa mgbe, lee dịghị ihe ọzọ! -Enwe ego ọnụego nke ruo 15% - eji nkwalite koodu MEMBER15 mgbe ntinye akwụkwọ gị ụlọ anya anyị ọhụrụ rụzigharịa ụlọ na oke ime ụlọ ebe a na Dixie Orange County na ndị a họrọ na-enye:
-AAA Otu discount
-Corporate Business Discount
A nti ID na otu kaadị chọrọ n'elu ego-na-enweta ego. Limited nnweta.
Dixie Orange County chọrọ iji hụ na gị na ezinụlọ gị ga-esi otu oké udu na ị na-ahụ online mgbe ị AKWỤKWỌ kpọmkwem site na anyị ma zọpụta 10%. Ntinye akwụkwọ kpọmkwem bụ adaba na mfe na nwere ọ dịghị ọzọ zoro ezo ụgwọ achọrọ site na atọ ọzọ na saịtị. Dị pịa na bọtịnụ n'okpuru na Zọpụta 10%!
All abụọ na-agụnye:
Irè n'ihi online abụọ nanị. Jiri nkwalite koodu DIRECT10 mgbe na-eme gị ndoputa.
n'oge a kara aka Ọpụrụiche
Eme ka afọ a na- extra ihunanya onye gị pụrụ iche na mmadụ na akwụkwọ anyị Ihunanya Getaway ngwugwu. Dị dum ọnwa nke March. -Enwe champeenu, chọkọletị, na nri ụtụtụ na bed na otu n'ime anyị mma ọhụrụ rụzigharịa King Oke ime ụlọ na Dixie Orange County. Udu-amalite na $ 99 / abalị na-agụnye:
-Cozy King Suite n'ụzọ zuru okè kwesịrị ekwesị n'ihi na 2
-Ọ Bottle of Champagne
-Breakfast Na bed abụọ
(1 ụtụtụ gị oke)
-1pm Mbubreyo ego-apụ
Ihe ndị mmadụ na-ekwu banyere anyị
"Ọ on a uko ego ịga a music mbono na dị mkpa ebe ịnọ na ya agaghị eme ka tipịasịa. M nnọọ obi ụtọ mgbe anyị na-aga n'ime anyị ụlọ maka price. M chere na ọ nọ na-aga na-bụzi ihe mgbe ochie, ma ọ na arụgharịrị ọhụrụ oge a na ọcha. O juru m anya !! "
"Enyi na Enyi ahịa ọrụ site Oche ihu ọrụ, nwoke na nwanyị. Ha mere ka obi dị ka ma ọ bụrụ na m bụ n'ụlọ. "
"Nke a na ọnọdụ dị egwu o !! Newly rụzigharịa, oké akwa, blanket, Ohiri isi ... niile ọhụrụ! The ụlọ bụ omume ọma chọọ ya mma ma dị nnọọ ukwuu. Ụlọ ịwụ squeaky ọcha, nnọọ jụụ mposi. Nza nke na-adọba ụgbọala. Nnọọ juru oyi. Ákwà-nkwuba di nwa si ụdị. "
Nnukwu ọcha na jụụ. Nso niile na-adọrọ mmasị, Disneyland na Beach. Ga-ukwuu nwere ike ikwu ebe a ka onye ọ bụla na-achọ ebe mara mma na a uko ego. Karl mere onye pụtara ìhè ọrụ na niile m mkpa m na di aṅa ntị. Ga-maa gaa na ebe a ọzọ! Omume ọma rụgharịrị ụlọ na ngwa ndakwa nri na friji. "
"Unu emeela maka a dị ịtụnanya n'ezie na ọnụnọ! Gị ọbịa bụ nnọọ ọpụrụiche. Anyị nwere ihe nile dị anyị mkpa n'ebe dị nso, ebe iri ihe, Knott si Berry Farm na Disneyland. The ụmụaka nwere a gbawara egwuri egwu ọdọ mmiri e ji egwuri egwu. Anyị ga-azụ ọzọ !! "
Soro anyị na Facebook nke pụrụ iche na-enye
Anyị Sister Property
Ị ga-enwe Anyị Ise kpakpando bụ ọrụ ọ atọ anyị Star nwanna nwaanyị onwunwe na Hollywood, California. Mụtakwuo n'okpuru na akwụkwọ ime ụlọ gị na taa!
Kpọtụrụ Nọnyeere Anyị
Stanton, Azu 90680
Akwụkwọ Akụkọ Banye Up
omume Submission Sitemap
Chefuru okwuntughe? (Nso)
Chọrọ Nbanye? (Nso)
Aha ojii ma ọ bụ Email